काठमाडौँमा शनिबारदेखि महाभेला ! | suryakhabar.com
Home पु.समाचार काठमाडौँमा शनिबारदेखि महाभेला !
on: २२ मंसिर २०७४, शुक्रबार ११:०४ In: पु.समाचारTags: No Comments
काठमाडौँ । नवौँ मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला शनिबारदेखि काठमाडौँमा शुरु हुने भएको छ । यही मंसिर २५ गतेसम्म डिल्लीबजारको नेपाल सांस्कृतिक संघमा हुने उक्त महाभेलाको उदघाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्ने कायक्रम छ । आगामी सोमबार सम्पन्न हुने सो भेलामा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको पनि सहभागिता रहनेछ ।
उक्त कार्यक्रमको ‘विकास र समृद्धिको आधार : महिला र युवाको समान अवसर’ भन्ने नारा तय गरिएको छ ।
उनान्सत्तरिऔँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसर पारेर गर्न लागिएको उक्त महाभेला यस वर्ष न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल, संकल्प र युथ एडभोकेसी नेपालको संयोजकत्वमा हुन लागेको हो ।
तीनदिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त भेलाले मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा हुने प्रभातफेरीमा सहभागिता जनाउनेछ ।
मुलुकमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्थाका प्रतिनिधिबीच छलफल हुनेछ । देशमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ, नयाँ संरचनाअनुसार आगामी दिनमा त्यसलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सहभागीले धारणा राख्ने कार्यक्रम छ ।
महाभेलाका राष्ट्रिय संयोजक लिली थापाले संविधानमा सबैका अधिकारलाई सुनिश्चित गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेकाले युवा तथा महिलाको अधिकार प्राप्तिमा समस्या देखिएको बताए । मुलुकमा परिवर्तन भएको राजनीतिक प्रणालीले समयसापेक्ष मानव अधिकारका क्षेत्रलाई सबै नागरिकको पहुँचमा पु¥याउनका लागिसमेत छलफल गरिनेछ ।
कुपण्डोलस्थित शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि महिला सञ्जालले महाभेलाको सचिवालयका रुपमा कार्य गरिरहेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला मूल आयोजक समितिले विगत आठ वर्षदेखि संयुक्त रूपमा महाभेलाको आयोजना गर्दै आएको छ ।
डरलाग्दो मतगणनास्थलबाट हेलिकप्टरमा मतपेटिका ल्याइयो !
२२ मंसिर २०७४, शुक्रबार ११:०४